बिदा | Shresthakedar's Blog
साभार:- mysansar, on January 7th, 2012
आज शनिबार,अफिस बिदा। घर जाने हतारोमा चिया नै नपिई ऊ डेराबाट निस्क्यो। दायाँ बायाँ कतै न हेरिकन सरासर बसपार्कतिर लाग्यो। उसको मन मष्तिष्क घरको सम्झनाले निथ्रुक्क हुँदै आइरहेको छ।
कहिलेकाहीं उसलाई सहरको डेराको जीवनदेखि वाक्कदिक्क नलागेको पनि होइन। तर के गर्ने गाउँमा भएको खेतीपातीले वर्ष दिनको भोकलाई माथ गर्न पर्याप्त छैन । फेरि लुगाफाटो नून तेलको जोहो पनि त मुख बाएर बसेको नै हुन्छ। पिउनको जागिर। जेनतेन धाउनु त पर्यो नै।
गाउँमा हुन त तीन ज्यान मात्रै छन्। बा, आमा र छ महिना अघि मात्रै बिहे गरेको श्रीमती मात्रै। दाई भिन्नै बसेको बर्षौं बिती सक्यो। भिन्नै बसेपछि बाउ , आमालाई हेर्नै नपर्ने चलन। अंश न पाउन्जेल बाउको खुशामद गर्यो। पाएपछि , नाक मुख नदेखेको बर्षौं बित्यो। अधिकार मात्र खोज्छ , कर्तव्यलाई स्वास्नीको फरियामा पोको पार्छन्। आफ्नो बाउ आमा हो। उसलाई त माया लाग्छ। कुनै बेला मन अमिलो हुने कुरा मात्र हो यो , उसको।
उसो त बिहे गरेको लगत्तै श्रीमतीलाई पनि काठमाडौँ ल्याउन न चाहेको कहाँ हो र! तर बल्ल कर गरि गरि छोरालाई मनाएर भित्राएकी बुहारीलाई घरधन्दामा न लगाईकन छोराको पछी पछी लगाई पठाउन कुन सासुले सक्लिन र उसले पनि मुखै फोरेर पनि भन्न सकेन आफ्ना बा आमालाई।
हुन त काठमाडौँबाट तीन घन्टाको मोटर बाटो, एक घन्टाको पैदल बाटो मात्र हो। घरमा पुग्न बढी से बढी लाग्ने समय भनेको पाँच घण्टा मात्र हो । शनिबार बिहान सखारै हिड्यो भने बिदा मनाई वनाई, आईतबार घरबाट चारै बजे हिड्यो भने दस बजे भित्र जसरि पनि अफिश पुगिहाल्छ। उसको समयको तालमेल मिलेको पनि छ अहिले सम्म त। बिहे गरेको शुरु शुरुमा ऊ हप्तैपिछे घर न पुगेको पनि काहाँ हो र एक दुइ महिना सम्म। बाउले t उसलाई केहि भनेन तर आमा कराउन थालीन्। छोरो यसरि घर आउन थालेकोमा।। त्यसैले यहि कुरामा रिसाएर ऊ घर न गएको पनि महिना दिन नाघिसकेको थियो तर आज ऊ मनले बाँधिएर , खुट्टाले डोर्याएर उसलाई उसको गाउँ तिर लगिरहेको छ।
बस आफ्नो तालमा गुद्दैछ। बसको गति भन्दा उसको मनको गति अत्यन्त तिब्र छ। तर लोकल बस न हो गन्तव्यमा पुग्न जति ढीला भो उति ड्राईभर र खलासीलाई उति फाईदा। बाटोमा हिंड्ने बटुवाले जहाँ हात उठायो त्यहीं बस घ्याच्च रोकिन्थ्यो। बसमा बस्ने त के उभिने ठाउँ सम्म पनि मुस्किल थियो तर ऊ बाध्य थियो उसलाई बस संगै यात्रा गर्नु थियो। बसलाई, ड्राईभरलाई उसको हतारो सित केहि मतलब थिएन जब जब बस रुक्थे उसलाई सिटमा बसी नसक्नु हुन्थे जुरुक्क उठेर निस्कुँ जस्तो लाग्थे। बरु हिंडेरै छिटो घर पुगिन्छ कि जस्तो पनि लाग्थे ।
अरु बेला तीन घण्टामा आईपुग्ने, आज बल्ल चार घन्टामा उसको बस बिसौनी आईपुगे। ऊ हतारिंदै बसबाट ओर्ले र आफ्नो गाउँको बाटोको उकालोतिर लम्के। उसका पाईला त्यो गोरेटोमा हिंडेको भन्दा पनि उडेको जस्तो भान हुन्थे। ऊ सासै न फेरिकन एक तमासले हिंडेको हिंडे गर्यो।
करिब आधा आधि घण्टा पछी पीपलको चौतारी निर पुगेपछि उसले पर सम्म आँखा डोर्यायो। यहाँबाट अलि टाढा उसको घर देखिन्थ्यो र उसलाई अलिकति राहत मिल्थ्यो तर ऊ कहिले पनि थकाइ मार्न चौतारीमा बस्दैनथे। ऊ झन् घर पुग्न हतारिंथे . आज पनि ऊ थकाइ मार्न बसेन। उसका पाईला झन छिटो छिटो बाटो नाप्न थाले।
ऊ घर पुग्यो। रुखको हाँगाले बन्द गरिराखेको आँगनको प्रवेशद्वार खोल्दै भित्र छिर्यो। पिढीमा बसिरहेको बाउलाई ढोगे र यता उति नजर डुलाउँदै सोधे – ‘आमा खोइ त ? ‘ – जवाफमा बाउ चाहिंले त्यहिँबाट आवाज लगाए ‘ए बले कि आमा तेरो छोरा आ’को छ , बाहिर आ’ त .”
ऊ एक छिन सुस्ताउन पिढी मै थचक्क बसे . एकछिन पछी हातमा आम्खोरा लिएर आमा देखा परी .
‘धेरै दिन पछी आयौ नि छोरा, ल पहिला हात गोडा धो, आराम गर अनि खाना खानु पर्ला .’
तर उसको मन र आँखाले पातलीलाई खोज्न थाल्यो। अरु बेला त ऊ आएको थाहा पाउना साथ ढोकाको खापामा जिउ आधि लुकाएर चियाउन आइपुग्थी र उसलाई हेरेर लाजले अनुहार रातो पारेर भाग्थी, तर आज किन देखा परिनन् !
उसले पुलुक्क आफ्नो बा आमाको अनुहार हेरे, र सोधे-’ पातली त देख्दिन नि म , कता गईन , घाँसपातको लागि गा’की छिन कि ?’
उसको प्रश्नमा आमा चाहिं ले लामो सास फेरिन। उसको छाती नराम्रो आशंकाले धक्क फुल्यो . अनुहारको रंग फुरुंग उड्यो .
‘कहाँ घाँसपातको लागि जानु नि। मेरो यो बुढी हड्डीले बुहारी पाएर पनि सुख पाएन . के गर्नु , मेरो त कर्म नै यस्तो .’
अब त उसको हृदयको स्पन्दनले तिब्र गति लिन थाल्यो। लगभग चिच्याएको आवाजमा सोधे -’के भो आमा पातलीलाई ?’
– ‘के हुनु नि त्यसलाई। थला परेकी छे। स्वास्थ्य चौकीमा हिजो लगेर देखाको कम्पाउन्दरले टाईफाईड हो कि के हो भनेको छ। औषधि लिएर आ’की छुँ। जरो त हनहन्ति नै छ बिचरीको। ,तँलाई खबर गरूँ कि जस्तो लाग्या’थ्यो, तँ नै आइपुगिस् , ठिकै भो ‘
आमाको कुरा सुन्दा सुन्दै ऊ हत्तारिंदै घरभित्र पसे।
भित्र कोठामा गुन्द्री माथि ओछ्यईएको बिछ्यौनामा जरोले थला परेकी पातली, बले आएको देखेर बिस्तारै उठ्न खोजिन् .
-’भयो भयो न उठ तिमी आराम गर। ‘
भन्नलाई त उसले पातलीलाई आराम गर भन्यो। तर उसको मुखबाट मनको कुरा पनि प्याच्च निस्की हाल्यो -’आज शनिबार, बिदा भनेर घर आ’को के गर्ने <'
– ऊ दिक्क माने जस्तो भयो उसलाई स्वास्नी बिरामी परेको पीर भन्दा पनि उसको बिदा खेर जाने कुराको पीर पर्यो .
आफ्नो लोग्नेको कुरा सुनेर पातलीको मन कुँडियो तर पनि लोग्नेको मन राख्न भनिन् -‘जरो त त्यति साह्रो छैन जस्तो छ औषधि खाएर कम भा’को छ धन्दा न मान्नुस, तपाईं ‘- पातलीको कुरा सुनेर उसको मुहारमा चमक देखा पर्यो ।
बेलुकीको खाना पछी सुत्ने सुरसार गरे। उसले मलाई त निन्द्रा लाग्यो, भोलि बिहान नै फेरी अफिस भ्याउने गरि हिंड्नु पर्छ भन्दै अर्को पट्टि फर्केर सुत्यो। तर ऊ कहाँ सुत्न सक्यो र बस आँखा चिम्लेर सुतेको स्वांग पार्दै पल्टीरहे। रातको बाह्र बज्यो , एक बज्यो। घरि यता पल्ट्यो घरि अर्को पट्टि पल्ट्यो। जसरि कोल्टे परे नि उसको निन्द्राको ठेगान नै भएन।
जरोले थला परेकी पातली आफ्नो लोग्नेको छटपटी , चाहनाबाट अनभिज्ञ थिईनन-‘ किन तपाईंलाई निन्द्रा लागेन जस्तो छ आउनुस वर आउनुस’- पातलीले आफ्नो लोग्नेलाई आमन्त्रण गरिन। ऊ बिस्तारै अघि सरे। उसका हात सल्बलाउन थाले। जिउ भरि बिजुली चम्के जस्तै भयो। उसका हातले पातलीको शरीर स्पर्श गर्न थाले जहाँतहीं। ,अहो ! ऊ त तर्स्यो। कस्तो तातो जरोले हरंत , पसिनाले निथ्रुक्क पातलीको ज्यान। ऊ अन्तरद्वन्दमा फंस्यो। एकछिन मन मनै गुन्यो , जरो त निकै नै छ। अब के गर्ने के नगर्ने, अघि बढ्ने कि न बढ्ने। केहि बेर ऊ शून्य प्राय: स्थितिमा अचल बने। एकछिन पछी फेरि सोचे, भोलि बिहान अफिसको लागि हिंड्नु त जरुरि नै छ। अब फेरी गाउँमा आउने भनेको फेरी कहिले कहिले हुन्छ। उसले सम्झ्यो। बसमा घन्टौंको यात्रा , डेराको एकाकिपन। उसको गला स्याप्प सुक्न थाले। मनको प्यास , तनको भोकले ऊ पूर्ण रूपमा घेरिसकेको थियो . उसको अगाडी यतिबेला बिरामी स्वास्नी नभई, नारी शरीर पसारिएको छ , अनि उसले अघि बढ्ने नै निस्चय गर्यो र अघि बढ्दै गयो।
विवशता (कथा) »